Kusasele iminyaka engaphezu kwekhulu lwesintu kabanzi isebenzisa ugesi. Ikhishwa ezingenakubalwa zonke izinhlobo amadivaysi. Kulokhu, akekho akucabangayo mayelana nokuphepha kwabo.
Eminyakeni eyishumi edlule iye yandisa inani umzimba womuntu pathologies ekwelapheni engesiyo imithi ndaba. Isizathu kuvamise kungabi nezimo ezimbi kangaka kwemvelo, ngokungaqondi ukuthi izinqubo e wonke amadivayisi usebenza ngesisekelo lo mkhuba umugqa wemiyalo.
Uma ezithinta izinqubo zemvelo ezenzeka ngokwemvelo, zingabantu ngokuhambisana nomthetho ukulondolozwa umfutho. Ngamagama alula, ukuqaliswa isenzo akunakwenzeka ngaphandle Fulcrum, futhi ngenkathi lenzeka, into futhi ukusekelwa ayalingana umthelela lokukhanda. Uma sibheka le nkinga ngokusebenzisa iphrizimu vortex izinqubo, kuvela ukuthi ukusungulwa emisebeni kagesi, ngesisekelo yiyona indiza electrostatic.
ikhoyili zokwelapha Mishina, izimpendulo zazo kusikisela ukuthi unakho ngezinga eliphezulu ukusebenza, inikeza vortex izinqubo. Sinenkosi luphulukisa.
Lokho ukubhubhisa amandla emisebe ye?
Ukuphila kwethu ugcwele pulsations okuqhubekayo okuvela basebenzise izinto zikagesi. Ibe nethonya elilimaza kakhulu ezingeni yamangqamuzana ezinto eziphilayo. Ngenxa yalokho, saturation okubangelwa anda amandla amangqamuzana, okuholela kwetinhlavu amaqoqo amakhulu. Abaningi looped ukwakheka kwama-molecule zomzimba womuntu ayikwazi ziphathwe nemithi ngokuqondene izinga labo eliphezulu amandla. zokwakheka ezifana emzimbeni kuhilelani ukubukeka umdlavuza noma uvimba yimuphi umsebenzi emzimbeni.
Indlela zifane kakhulu - ukudalwa esishintshashintshayo density esincishisiwe medium usebenzisa electrostatic Implosion resonance. Lo mphumela inikeza ikhoyili zokwelapha Mishina.
Ingqikithi yomsebenzi wakhe empeleni isekelwe ngamandla adonsela phansi. Nokho, lo engaba isinyathelo zedivayisi incane. He is amamitha 2-3 kuphela. Yeqa ezingeni umthamo imishini incike voltage. Yamandla ikhoyili Mishina has a imvamisa lo voltage okukhiphayo of 12-24 volts. figure wamanje kumele singeqi 100-200mA.
Izimiso yokukhiqiza ikhoyili Planar (DMA)
Indlela yokwenza leli thuluzi, ikhoyili Mishina, ngezandla zakhe? Kudinga ngaphambi yokukhiqiza lezisekelo, okuyinto kufanele unamathele double itheyiphu emaceleni. round protrusion isethwe maphakathi. Ubukhulu bayo 25 mm. Babalelwa ku-ke, futhi iqala laying izintambo ezimbili ukuba aqambe amanga kuhambisana indiza isizinda.
Generator for zokwelapha ikhoyili Mishina kungaba ukumisa ejwayelekile. Amandla akhe kungaba okwanele ngenjongo yokuzijabulisa. Isikimu generator ikhoyili Mishina abekwe ngezansi.
Ngemva esikhiqiza thuluzi isitsha etholwe esekelwe yebhangqa amapuleti Helical ukuthi owakhe isidleke sakho phakathi komunye nomunye. Okungenzeka ukusebenzisa noma yimaphi wire ithusi, ubukhulu asiqhutshelwa ukwahlukanisa ngeke idlule 1.5 mm. ububanzi ikhoyili kumele ingabi ngaphezu kuka 23-25 cm. The wire eqondiswa phezulu. Lungisa esebenzisa ngethephu enamathelayo kungenzeka.
Mishina ikhoyili wesifunda engesiyo eziyinkimbinkimbi kangaka, kungase kahle kuqoqwe bebodwa. Izinto ekukhiqizeni yayo itholakala kalula kunoma isiphi isitolo of izinto zikagesi.
Indlela usethe ikhoyili phezu oscilloscope?
Whirlpool Mishina ikhoyili kumele imvamisa echaziwe. Ngenxa yale njongo, idivayisi Yenziwe ezimbalwa ompompi. Kumelwe uthathe Waphetha enye yesaha ngamafutha kwangaphakathi ikhoyili ingxenye futhi kube komunye umkhawulo womhlaba ne Ingaphandle. ngaleyo ndlela iketanga uvuliwe, futhi laba ababili okukhipha amapuleti ubuningi kufanele usike.
Iyasebenza, indinganiso uhlobo generator, amandla okuyinto 2W, idivayisi unganquma imvamisa wokusebenza ngokuxhuma i parallel oscilloscope probe terminals generator. lapho imvamisa oscillator luyanda ngokushelela. Kuchazwa imvamisa kuqala lapho generator has okukhipha voltage ngezansi. Lokhu kuyoba yinto inkomba imvamisa yokusebenzisa yedivaysi.
Eyesibili samuntu nesilinganiso voltage
Futhi, idivayisi lingalinganiswa usebenzisa Resistor-10 m, okuyinto ixhunywe circuit supply e chungechunge. Kufanele ukuhlonza eliphakeme amplitude value. Le ndlela yenza kube lula ukuhlola ezingeni izinga ilethwa itheku umthwalo umthamo imodi.
Indlela yokwenza isizinda LED?
Nquma umthamo ukusebenza esebenzisa ikhoyili imvamisa ikani inkomba. Kuyinto idivayisi exhasa, lapho LED amabili aphikisanayo kuhlanganisiwe.
Nale ndlela, ungathola ukuvama izinga esiphezulu luminosity LED. Generator voltage kuyehla kuleli cala. Lokhu kunciphisa ibanga lokuvama lapho luminescence siyenzeka.
Inkomba ngempumelelo ikhoyili imvamisa
Uma unikeza yasibamba okunamandla izintambo hhayi kudivayisi a ukusonteka eqinile mechanical, ngemva kokuhlela elikhulu amandla nobuningi umthamo, imvamisa yayo ingxenye uma kusetshenziselwa ngeke kushintshe. Ngoba ngenhla design umthamo, imvamisa silinganiselwa 310 kHz. Inkomba ye-ngempumelelo isignali supply imvamisa Ibanga ngaphakathi ± 10 kHz ngokuhlobene imvamisa zokusebenza.
idivayisi okunjalo has a spectrum ebanzi futhi ongaphakeme electrostatic izinguquko umyela indiza maphakathi kudivayisi ngesikhatsi kokuhlinzwa. Lokhu Iyokwenza ngokuphumelelayo ohlelweni sezinzwa, iziyaluyalu kwegazi futhi ekuqedeni nezinye izinkinga eziningi emzimbeni vortex.
Izici cm Planar ikhoyili isakhiwo 12
Izinga eliphakeme kwethonya kumiswa pathogenic ifa zokwelapha Mishina ohlobo nge ibanga enciphile phakathi electrode. Ngokwesibonelo, ngocingo nge ingxenye 0.5 mm ukwahlukanisa ukuvenisha. Ubude wire ngamunye kuyoba 10-12 amamitha.
Inkomba njengoba ububanzi kwangaphakathi cishe u 25 mm kanti yangaphandle - 130 mm. esitsheni okunjalo ezingeni lelisetulu nekghono. Kungaba kuthinte amagciwane kwencani, isikhunta, ukuqeda nezibazi futhi kunonophisa luhlelo izicubu ukuvuselelwa.
Izakhiwo Torus ukumisa (TMA Ungalokothi)
Ukwehla okwalandela esigabeni jikelele wire lekhoyili usayizi eyayiyoholela ukudalwa izinguqulo iyashelela besikhundla vortex. Lapho inani zangaphandle ububanzi 51 mm kanti yangaphakathi ububanzi 25 mm, ukushuba we wire is wadala mayelana 0.1 mm.
idivayisi enjalo kunzima ukwenza ngesandla. Kuyancomeka ukusebenzisa inguqulo lula kungaphefumuli yokukhiqiza of a Torus.
Ukuze wenze Torus, uzodinga-15 metres ezisontekile-pair ikhebula (UTP 5e). I wire kuhlanganisa ezine noma eziyisishiyagalombili imicu ukuthi kukhona ngazimbili elisontiwe. Kuyadingeka ukuba asuse ukwahlukanisa elingaphandle ikhebuli ukuhlukanisa omunye nomunye umbhangqwana.
It singasetshenziswa cishe zonke izinhlobo izintambo ukwakha umthamo ofanayo. Isimo kuphela wukuthi ibanga phakathi izintambo kanye lonke ubude kumele kube okufanayo. Ngakho umbhangqwana ezisontekile kahle.
Okulandelayo, sebenzisa ucezu corrugations kagesi. Kuzoba ngesisekelo ngokudala umqulu imishini emazombezombe. I ububanzi we corrugations kufanele kube 25 mm. Kufanele zintengezele ku ubukhulu wayefisa Torus. slot ngaphandle. It is fixed pair of ematfuba ingcina tape.
Lokhu izinkampani ukuqinisekisa kumiswa efanele vortices. Uma lokhu kwenzeka kumiswa lahlukene amaza, lapho engxenyeni engaphakathi emazombezombe unesibopho ngemazinga lasetulu, nangaphandle - I-ongaphakeme.
Ngaphambi kokuqhubeka nge emazombezombe, bentambo kwangaphakathi ukuba okukhiphayo uhala emgodini lelungiselelwe kule corrugation, futhi ngemva emazombezombe nokuqalisa nenkanuko edlulele ezikhumulweni zangaphandle. Ukuze ulungise ikhoyili kumele zisuswe corrugation ezingxenyeni. Iziphetho pair basonta untwist futhi ubuningi - Ukulunywa
Ukunqunywa amandla efoni imvamisa
Okulandelayo, nqumani indlela imvamisa Torus supply. Ixhuma terminals generator lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kanye amaqembu ahlukene kunalawo kumadivayisi ngocingo. Ukuze sithole voltage ngesikhathi ekhishwa iphenya oscilloscope axhunyiwe ngqo terminals generator.
Ngokulandelayo, owokuqala imvamisa ingxenye ngokuhlobene undervoltage okokufaka esiphezulu. Ngamanye amazwi, kufanele ngomthamo usuwonke selisho imvamisa conduction. ukudla Eminye izobanjelwa nini le nkomba.
amandla lamakhoyili ohlobo
Amandla ohlobo enikeziwe itheku (nge-generator isignali). Amandla pulses ngu engamukeleki ngoba engenzi ifa inertia kule modi. Imvamisa ububanzi kahle ephezulu tori kuyafana for ukucushwa Planar ka coil. He is 270-380 kHz.
Phakathi ukusebenza idivayisi ugesi lovela generator kungenzeka prosest izikhathi eziyishumi noma ngaphezulu. Inkomba yomsebenzi ingqikithi ugesi kungenzeka asisikhulu kunenkosi 0.1 watts. Ubuningi amandla conductive zamanje kufanele igcine 200 ma, futhi voltage ingxenye ku 22-24 V
Uma lezi nemingcele eqolo, kungaholela ukuwohloka electrostatic okuzokwenza luboniswe kwababusi enkabeni yekhoyili.
Yiziphi ugesi ukuyisebenzisa?
Ngokuvamile esetshenziselwa generator ohlobo Mishina - TGS-3. Kuye ezenzakalelayo Tuning resonance.
Analogue professional Okuningi kubhekwa umfuziselo ATTEN ATF20B +. Phakathi zako akunakubangelwa ukutholakala ukubonisa, USB esibonakalayo, imvamisa esiphikisayo, msindo amandla, lo umumo gagasi. ikhoyili okunjalo generator Mishina Likhipha isignali hhayi othola ukuhlanekezela.
ikhoyili Ukwelashwa Mishina
Ngakho, lungiselela ukumisa elula zedivayisi ngesimo Yikhoyili exhasa kungase kuwuthinte izinjongo zokwelapha kunoma izindawo inkinga yezinto eziphilayo. Ezimweni eziningi, iziguli ezinemishini amaphuzu ulwazi emzimbeni akudingekile, kusukela electrostatic kuthinta ngokuzenzakalelayo ubuhlungu isakhiwo ngakuthathu kusiza ukuzihlukanisa kwabo.
Kuyini eyakhelwe Whirlpool imithi? Amakhoyili Mishina ukunikeza amandla yemvelo isicelo imvelo ukuze nomthelela izinkinga abazalwane ababehlangabezana nazo ifomu carbon ukuphila. Le ndlela okulingana imiphumela kwamaphilisi, kanye esikhundleni imisebenzi ukususa umdlavuza neziqu. Imisinga eddy ikhoyili elakhiwe kalula ukubuyisela ethintekile ezinzwa.
Ukuhlola kuye kwabonisa ukuthi idivayisi?
Pho-ke, unakho ikhoyili Mishina? nokwelashwa kwayo linikeza imiphumela emihle. Uhlolo, okuyinto Kwakuseshwa phezu izinyanga eziningana, wembula ezingeni lelisetulu nekghono besikhundla electrostatic ukubuyisela imisebenzi elahlekile zomzimba. Lapho seseshini kuye ngokuthi isifo ezihlukahlukene imizuzu engu-5 ihora.
Izici ukwelapha izifo ezithile
Mishina ikhoyili kubangela ukukhululwa kwe semali ubuthi zisuswe ngu izinso umchamo. Ukuze sibhekane eliningi ezinjalo izinto eziyingozi kuyikuthi usebenzisa ikhoyili - akuwona umsebenzi olula. Ngakho-ke, ukuze uqale ukwelashwa kwe-lumbar.
Ukuze umzimba evamile elihlanza umbuso uyoba amaseshini eyanele ofika kumaminithi angu-30 kuya ku-40. Kufanele kwenziwe phakathi nezinsuku zokuqala ezinhlanu. Ikhoyili isetshenziswa esifundeni lumbar nasesifubeni. Loin lapho ukuchayeka yisici esibalulekile endleleni, njengoba kukhona imvume kwezinso. Lezi zidumbu izibalo zibonisa ukuthi isigamu sabantu kabi ivimbekile.
ngesonto lokuqala ukwelashwa ikhuthaza abalulekile umzimba ukuhlanzwa. Amasosha omzimba usebenza kwimodi eziphuthumayo, iqala ukuvuselelwa kwezicubu.
Isikhathi amaseshini owawuba ngesonto lesibili kungase kukhule ku imizuzu 60-90. Lona isilinganiso. Okuningi kuxhomeke esimweni ngabanye kanye nesifo.
Ngokwesibonelo, impatho izinso kufanele kube amaseshini ehlala njalo isigamu sehora. Uma, ngemva kokuhlinzwa, isiguli ekhononda izizwa ezizwa engaphilile, ubuthakathaka, Ukugodola, imfiva, ubuhlungu, kusho ikhoyili Mishina waqala ukukhinyabezeka kwayo. Uma umuntu akwazi ukukhuthazelela lolo isifo, kweseshini efanayo eyayikhona ngosuku olulandelayo. Uma isimo sempilo kubi kakhulu, kutuswa ukuba ukwelashwa luhlehliswe izinsuku ezimbili.
umuntu ngamunye akwazi ukunquma ukuthi ukushuba ukuchayeka idinga ukuba aphulukise. Session ubude besikhathi nesineke ukhetha ngamunye.
On abantu okhuluphele Bayadiyazela ekuqaleni bangase benze kahle. Electrostatics has a icala elithile, ezingaqedwa ngokuthi slag ukugaya emzimbeni. Lokho kwenza ukubhujiswa izinhlangano looped. Esimisweni olandelayo, ngaphandle kokuhlangana isendleleni noma yiziphi izithiyo, electrostatics ukungena kakhulu futhi sibhekane nalesi sifo. Kwamangqamuzana nokwakheka kwamanye ingaphazamiseki, njengoba umthetho, uku yamafutha amaningi emzimbeni. Yingakho abantu badinga amafutha kancane kuze kudlule isikhathi eside yokwelashwa. Ngokuvamile, lezi iziguli ungazizwa nanoma imiphi imiphumela kusukela izintshumayelo kulamalanga ekucala lasihlanu.
Proper imodi yokukhetha
Ngemva ikhoyili Mishina iqala ukusebenza, kumelwe uthole ukuthi indlela le modi ikufanele wena, kungakhathaliseki kubalulekile ukuze ungeze isikhathi ukuchayeka, noma kumele encishisiwe. Uma eholidini, ungakwazi iphendukele ofeza izinqubo nsuku zonke isikhathi eside. Ngakho ungakwazi ukuhlanza umzimba wakho ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ungasebenzisa futhi more yokwelapha mnene, ukuchitha amaseshini emfushane. Lokhu kulinganisela kusebenza abantu abangafuni avuze iyiphi izifo ezingathi sína efomini acute, ezidinga ukwelashwa okuphuthumayo.
On uhlobo lendawo isifo, isibonelo, ubuhlungu emadolweni noma migraine, kungathinta enye idivayisi - Torus. Lokhu Ungalokothi kunemiphumela zendawo uphelele le njongo. I ububanzi we kudivayisi ukuchayeka imayelana 10 cm.
Ikhoyili izici umsebenzi
Ngo ikhoyili zikhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kunzima ukuchaza.
Ngokwesibonelo, ikhoyili uyaqhubeka ukusebenza ngisho isimo unqamukile. inkomba kuphela ukusebenza yayo kuleli cala ngu-20%. Ngaphezu kwalokho, umthelela akugcini womuntu, okuyinto unamathele umzimba ikhoyili, kodwa futhi kubantu abaku- ke at ibanga 3-7 amamitha.
Abantu abaningi bayazibuza esingakanani ungasebenzisa leli thuluzi, ikhoyili Mishina. Ukwelashwa kufanele okwesikhashana ngemva umzimba ukuqeda zonke ubuthi, kusukela kudivayisi iyeke isinyathelo emzimbeni. Ungabeka ikhoyili emzimbeni usuku lonke, kodwa akukho umphumela kuwo ngeke. Yilokhu iyoba uphawu lokuthi uzimisele ukuthuthukisa impilo yazo.
Nobufakazi phezu kwekhoyili
Mishina ikhoyili, ukubuyekezwa lapho omuhle kakhulu, wasiza abantu abaningi ukuba balahle izifo ezinzima. Ngokusho nesineke eyodwa, ngokusebenzisa ikhoyili ke wakwazi ukubhekana nalesi sifo, ezifana ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso. Lokhu esondweni nomyeni wakhe benza yezandla zabo.
ngokuvamile ukwehluleka kwezinso iyona imbangela yokufa kwabantu abasha ngisho nezingane imbala. Njengoba landa inani kancane kancane ngenxa yokwanda kwethuba lokuba amacala unyaka ngamunye. Lesi sifo ngeke welaphe ngemithi. Kuyasiza kuphela ukufakelwa izinso noma isebenzisa umshini wezinso. Uthe owesifazane labetibambile amaseshini phakathi nenyanga, okwenza amakhefu iDemo.
Yini enye iye yasiza esondweni Mishina? Uphenyo ezinye iziguli abonisa ukuthi kungakapheli nenyanga waphinde wakwazi ukubhekana ne ekuhlushweni migraines yakhe.
Ukuzijwayeza osebenza izifo sibi kakhulu. Ingabe ikhoyili Mishina for izimila? Ngokusho kwenye nesineke, idivayisi wasikhulula kusukela lwezimpawu of oncological imvelo emakhwapheni. Ngemva usebenzisa ikhoyili owesifazane wayeka behlupha ubuhlungu.
Kanti futhi, abantu abaningi baye baphawula ukuthi ikhoyili newusizo kakhulu ubuhlungu esiswini, edema umlenze, ukukhathala emhlane.
iyona roll kanjani? Alexander Mishin, mayelana nokuthi zinengi, idale isimangaliso. Singagcina ngokubu- ukubonga umsunguli we amadivayisi nabugovu yakhe.
Zikhona yini imiphumela emibi?
Empini yokulwa nezifo eziningi okungamahlalakhona kungakwenza kubenze okubi kakhulu yesikhashana. Lokhu kufanele ungesabi. Uma lesi sifo ngokujulile enezimpande emzimbeni, kuyoba kancane kancane ukungena indlela yokuphuma.
Aleksandra Mishina ikhoyili zokwelapha kungadala ukukhuphuka lemifisha lokushisa komzimba, okuyinto sizoba kufikela kuzinsuku ezingu-3. Futhi kungenziwa imakwe ubuhlungu ukubelesela bemisipha. Ngemva ukusabela komzimba static igazi uthola okuningi wobuthi eziqukethwe umzimba. Lokhu kungadala ephakeme blood pressure kanye ukozela. Kuyadingeka ukuba nginikeze isidumbu sakho ukubhekana nalesi sifo. Kulokhu, it is hhayi Kunconywa ukuba sindisa. Kulokhu ikhombisa iphupho ezokwenza kuphela ukusiza ekwelapheni.
Static akuyona eyingozi amaseli
Ngemva kokuphulukisa eyisisekelo isifo umzimba cishe liyeka ukuphendula ukuze imiphumela electrostatic, njengoba izakhiwo looped manje.
isicelo eyengeziwe ohlobo ulungisiswa esimweni izimpawu isifo recurred. Khona-ke kuseshini kumele kutsatse emaminithi la-20. Lokhu kuyoba okwanele ukuba ayeke inkinga.
Ingozi amaseli enempilo umzimba esebenzisa le ndlela ingasetshenziswa kuphela uma ikhoyili ithumela amandla okusezingeni eliphezulu supply yezwakala. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sisebenzise generator sine ukuze ikhoyili Mishina. Uyokwazi ukuvikela umzimba kusuka ukuchayeka ngokweqile ukuze imisinga eddy.
Ithonya ohlobo izitshalo
Kukuphi lapho osebenza vortex imithi? Amakhoyili Mishina ukusiza izilwane nezitshalo. Inani zokuhlolwa luye lwabonisa ukuthi isenzo yedivayisi izitshalo endlini, kukhona ukukhula kwabo okusheshayo, futhi ukuhluma ngokushesha imbewu.
Kuphephe kangakanani ekwelapheni?
Ngaphansi iziqondiso ezithile ukwelashwa iphephile. Ngisho noma eqolo, khona-ke isilinganiso ingozi kuyoba 10%, okuyinto kakhulu. Asikwazi sibeke ngokuqiniseka ukuthi le ndlela yokwelashwa ayinazo usongo empilweni.
Njengoba ungase ucabange isenzo kwekhoyili?
ikhoyili zokwelapha Mishina likhipha amagagasi oluhambisana ku sphere. Ngo isikhungo salo Kumiswa ukujula isikhala ilingana ukuphakama ensimini. Amandla enkulu has wave abaseduze elise enkabeni eduze ophumayo. Uma sikhuluma ukushuba umthelela wave iseduze isikhungo kanye at the ophumayo ke kuyodingeka namandla 100%, futhi phakathi - 70%. Phakathi ezimbili ezikhumulweni umklomelo, lapho isifo zivame ukufiphala. Lapho umzimba uhlushwa izifo eziningi, amandla ukubhujiswa kwabo alanele. Endabeni le Torus ingaphezu nomthelela namandla njengesiphepho.
Indlela ukubeka idiski noma Torus emzimbeni?
Indlela ukunamathisela lekhoyili ukuze umzimba akunandaba ngempela, ngaphandle ekwelapheni ikhanda. Ukuze amabombo endaweni zedivayisi sisetshenziswa ngendlela yokuthi uma ubheka ephezulu, isilonda kufanele iqondiswe kwewashi. Ukuze izitshalo efanelekayo emazombezombe isiqondiso ngokwewashi.
Ikhoyili Mishina, okuyinto Izibuyekezo ezikahle, idivayisi vortex. Isetshenziselwa ukwelapha izifo of kobukhulu obuhlukahlukene. Abanye babeze babasize ukuba unqobe umdlavuza.